CDC: Mety mila fanavaozana ny famaritana ny hoe 'voa vaksiny tanteraka'
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Etazonia Vaovao Vaovao » CDC: Mety mila fanavaozana ny famaritana ny hoe 'voa vaksiny tanteraka'
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • teknolojia • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao
Talen'ny US Centers for Control and Prevention (CDC), Rochelle Walensky
Walensky dia namporisika ny Amerikana rehetra mendrika handray ny tifitra fanamafisam-peo, na inona na inona fiantraikany amin'ny ho avy amin'ny satan'ny vaksiny.
Ny mponin'i Etazonia dia heverina ho vita vaksiny tanteraka raha manana fatra roa amin'ny vaksiny Pfizer na Moderna, na ny tifitra iray ilaina amin'ny jab Johnson & Johnson.
Raha toa ka tafiditra ao anatin'ny fepetra takiana ho raisina ho 'vita vaksiny tanteraka' ny boosters, dia maro amin'ireo nahazo fitifirana aloha no mety mila mahazo booster.
Ny Boosters ho an'ny vaksiny rehetra misy any Etazonia dia nahazo fankatoavana avy amin'ny CDC sy ny Food and Drug Administration, fa ho an'ny vondrona mendrika ihany.
Ny Amerikanina dia heverina ho vita vaksiny tanteraka raha manana fatra roa amin'ny vaksiny Pfizer na Moderna, na ny tifitra iray ilaina amin'ny jab Johnson & Johnson.
Mety hiova tsy ho ela izany.
Araka ny filazan'ny Talen'ny Etazonia Foibe Miady Amin'ny Aretina (CDC), Rochelle Walensky, dia nilaza fa ny masoivoho dia mety hanitsy ny famaritana ny hoe "vita vaksiny tanteraka" amin'ny COVID-19, ankatoavina ary azo ampiasaina amin'ny tifitra fanamafisam-peo.
Walensky dia nanontaniana tamin'ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety androany, raha mila mahazo fatra fanampiny ireo izay mendrika amin'ny tifitra booster mba hitazonana ny satan'ny vaksiny feno.
"Mbola tsy nanova ny famaritana ny hoe 'vita vaksiny tanteraka' izahay," hoy i Walensky, ary nampiany fa amin'izao fotoana izao dia tsy ny Amerikana rehetra no mahazo tifitra booster.
"Mety mila manavao ny famaritana ataontsika momba ny 'vita vaksiny tanteraka' isika amin'ny ho avy," CDC hoy ny tale.
Raha toa ka tafiditra ao anatin'ny fitakiana ho raisina ho 'vita vaksiny tanteraka' ny boosters, dia maro ny Amerikanina nahazo ny tifitra azy tany am-boalohany dia azo inoana fa mila mahazo mpanentana mba hitazonana ny satan'izy ireo 'voa vaksiny'.
Ny tifitra booster ho an'ny vaksiny rehetra misy any Etazonia dia nahazo fankatoavana avy amin'ny CDC ary Fitantanana sakafo sy fanafody (FDA), fa ho an'ny vondrona mendrika ihany.
Nankatoavin'ny CDC ny fatra fanamafisam-peo ho an'ny olon-dehibe rehetra nahazo ny vaksiny Johnson & Johnson, ary ny zokiolona sy ny olon-dehibe tsy voan'ny immunocompromised ho an'ny vaksiny Moderna sy Pfizer.
Walensky sy ny CDC dia nanambara tamin'ity herinandro ity fa afaka mampifangaro sy mampifanaraka tsara ny tifitra booster ny olona. Nanambara ihany koa ny masoivoho androany fa hiitatra amin'ny volana ho avy ny fahazoan-dàlana ho an'ny boosters.
Walensky dia namporisika izay rehetra mendrika hahazo ny tifitra booster, na inona na inona fiantraikany amin'ny ho avy amin'ny satan'ny vaksiny.
"Izy ireo dia tena mahomby amin'ny fampihenana ny mety hisian'ny aretina mafy, ny hopitaly ary ny fahafatesana, na dia ao anatin'ny variana Delta miparitaka be aza," hoy ny talen'ny CDC.
Araka ny angon-drakitra CDC farany, maherin'ny 66% amin'ny mponina amerikana no nahazo fatra iray farafahakeliny amin'ny vaksiny COVID-19.